Jonathan Ball Publishers : Iphupho lomdansi we-Bhaleyi
Eneminyaka amithathu, uMichaela DePrince wathola isithombe somdansi we-bhaleyi esasizoguqula ukuphila kwakhe unomphelo. Ngaleyonkathi wayehlala endaweni ezintandaneni e-Sierra Leone, kodwa maduzane watholwa umndeni othile wayiswa eMelika.
Nakuba ekuqaleni wayengazi ukuthi i-bhaleyi iyini akasikhohlwanga isithombe somdansi we-bhaleyi ake wasibona. Wayefisa ukujabula njengalomdansi. Lapho umama owamtholayo ebona ukuzimisela kwakhe nge-bhaleyi, waqalisa ukumyisa ezifundweni ze-bhaleyi. Selokhu adansa kusuka lapho kuze kube manje.
UMichaela waqokwa njengomdansi osemqoka omncane kunabo bonke ku-Dance Theatre yase-Harlem. Manje udansa ne-Dutch National Ballet, inkampani ephezulu ye-bhaleyi yasemandulo.
UMichaela waba ngumlingisi oyinhloko ku-First Position, idokhumentari eyawina umklomelo. Usebonakale kaningi kuthelevishini kuhlanganise i-Dancing with the Stars ne-BBC News.
Ngo-2015, uhlelo lwethelevishini yase-Hollandi lwenza ukuthi uMichaela abonane okokuqala no-Magali Messac, umdansi we-bhaleyi owayesesithombeni.
u-Michaela DePrince wazalwa ngo-1995 e-Sierra Leone. Ngemva kokufa kwabazali bakhe, uMichaela wahlala ezintandaneni lapho atholwa khona ngu-Elaine DePrince wamyisa eMelika ngo-1999.
Umama wakhe u-Elaine DePrince, abhale naye lencwadi, wamyisa ezifundweni ze-bhaleyi. Namuhla u-Michaela ungumdansi ongumpetha we-bhaleyi ne-Dutch National Ballet. Uye wavela futhi ku-albhamu yevidiyo ka-Beyoncé i-Lemonade.